သင်္ကြန်ရေကြောင့် အရေပြားယားယံပြီး မိတ်ဖုထွက်တဲ့အခါ ….
6 Apr 2018 . 6:45 PM
ယခုလို ပူပြင်းလှတဲ့ရာသီဥတုမှာ တော်တော်များများကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာများထဲမှ အရေပြားရောဂါက အဆိုးဆုံးပါပဲ။ လာမယ့်အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်မှာ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေကြောင့် အရေပြားယားယံတာမျိုးလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ရေနဲ့နေလောင်ဒဏ် နှစ်ခုပေါင်းစပ်မိတဲ့အပြင် ပူပြင်းလှတဲ့ နေရောင်ခြည်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိခြင်းကြောင့် ချွေးမှတစ်ဆင့် ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားများ ကူးစက်ခြင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူများနေခြင်း စတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အင်ပြင်၊ မိတ်ဖု၊ အနီစက်များ ထွက်ပေါ်လာရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်ပြင်၊ မိတ်ဖုများက ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ နေရာမရွေး ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ခေတ္တခဏသာ ယားယံပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းသာ ပျောက်ကင်းသွားတာလည်းရှိသလို ရက်သတ္တပတ်ကြာသည်အထိ ယားယံတာတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်တာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ယားနာလိမ်းဆေးမျိုးစုံရှိပေမယ့်လည်း ဓာတ်မတည့်သူ၊ အလာ့ဂျီဖြစ်တတ်သူတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူများသူတွေအတွက်တော့ လိမ်းဆေးလိမ်းရုံနဲ့ သက်သာပျောက်ကင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဘာတွေရှောင်သင့်လဲ၊ ဆောင်သင့်လဲဆိုတာတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
(၁) ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့် ချွေးထွက်ပြီး အဖုအပိန့် သေးသေးထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကုတ်လိုက်မိကြမှာပါပဲ။ ဒီလိုကုတ်လိုက်မိတာကြောင့် အဖုကလေးတွေက ပွားများလာပြီး ယားယံလာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ချွေးထွက်နေချိန်မှာ အထူးသဖြင့် သင်္ကြန်ရေစိုနေချိန်မှာ အရေပြားကို သန့်ှရှင်းမှုမရှိတဲ့ လက်နဲ့ကိုင်ခြင်း၊ လက်သည်းနဲ့ ကုတ်ဖဲ့ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်မိဖို့ သတိထားသင့်ပါတယ်နော်။
(၂) အရေပြားယားယံနေချိန်မှာ ရေချိုးတဲ့အခါမှာလည်း အနံ့စူးရှပြင်းထန်တဲ့ ဆပ်ပြာခဲများကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ Chemical နည်းတဲ့ အပျော့စားရေချိုးဆပ်ပြာကိုသာ အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ရေနွေးနဲ့ချိုးမယ့်အစား ရေအေးအေးလေးနဲ့ ချိုးပေးမယ်ဆိုရင် ယားယံခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ရေချိုးပြီးရင်လည်း အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ် တစ်ခုခုလိမ်းပေးရပါမယ်။
(၃) အရေပြားရောဂါဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ပူပြင်းလွန်းတဲ့ နေရာတွေကို သွားလာခြင်းရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ရေပတ်ခံမထွက်သင့်တော့ပါဘူး။ မဏ္ဍပ်မှာ ထိုင်မယ်ဆိုရင်လည်း အရိပ်ရတဲ့နေရာ၊ လုံခြုံတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုး ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ အပြင်သွားရင်လည်း နေရောင်ခြည်နဲ့ အရေပြား တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိရလေအောင် ထီး၊ ဦးထုပ် စသဖြင့် အကာအကွယ်များဖြင့် သွားဖို့လိုပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ အေးမြတဲ့နေရာမှာ အနားယူမယ်ဆိုရင် အမြန်ဆုံးသက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။
(၄) ဘာကြောင့် အင်ပြင်၊ မိတ်ဖု ထွက်ရသလဲဆိုတာကို မိမိကိုယ်ကို စမ်းစစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်ခင်မှာ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ၊ ဘာတွေစားခဲ့သလဲ၊ ဘယ်လိုနေထိုင်ပြုမူခဲ့သလဲဆိုတာတွေကို ပြန်လည်စမ်းစစ်ကြည့်ပါ။ ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် သာမာန်ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောဆိုပေမယ့် အောက်ဖော်ပြပါ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
– လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အသံဝါခြင်း
– ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းသွားခြင်း
– နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း
– နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် အဖုထွက်လာခြင်း စတာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။ အရေပြား ရောဂါသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ချို့တဲ့မှုကို ဖော်ပြတဲ့လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။
သင်ျကွနျရကွေောငျ့ အရပွေားယားယံပွီး မိတျဖုထှကျတဲ့အခါ ….
ယခုလို ပူပွငျးလှတဲ့ရာသီဥတုမှာ တျောတျောမြားမြားကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ပွဿနာမြားထဲမှ အရပွေားရောဂါက အဆိုးဆုံးပါပဲ။ လာမယျ့အတာသင်ျကွနျပှဲတျောမှာ မသနျ့ရှငျးတဲ့ရကွေောငျ့ အရပွေားယားယံတာမြိုးလညျး ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။ ရနေဲ့နလေောငျဒဏျ နှဈခုပေါငျးစပျမိတဲ့အပွငျ ပူပွငျးလှတဲ့ နရေောငျခွညျကို တိုကျရိုကျထိတှမေိ့ခွငျးကွောငျ့ ခြှေးမှတဈဆငျ့ ဘတျတီးရီးယားပိုးမှားမြား ကူးစကျခွငျးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျး အပူမြားနခွေငျး စတဲ့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အငျပွငျ၊ မိတျဖု၊ အနီစကျမြား ထှကျပျေါလာရခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အငျပွငျ၊ မိတျဖုမြားက ခန်ဓာကိုယျအနှံ့ နရောမရှေး ထှကျပျေါလာနိုငျပါတယျ။ ခတ်ေတခဏသာ ယားယံပွီး ရကျပိုငျးအတှငျးသာ ပြောကျကငျးသှားတာလညျးရှိသလို ရကျသတ်တပတျကွာသညျအထိ ယားယံတာတှေ ဖွဈပျေါတတျတာကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ယားနာလိမျးဆေးမြိုးစုံရှိပမေယျ့လညျး ဓာတျမတညျ့သူ၊ အလာ့ဂြီဖွဈတတျသူတှနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျး အပူမြားသူတှအေတှကျတော့ လိမျးဆေးလိမျးရုံနဲ့ သကျသာပြောကျကငျးမှာ မဟုတျပါဘူး။ မိမိရဲ့နထေိုငျမှုပုံစံကို ပွောငျးလဲရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီလိုဖွဈလာပွီဆိုရငျ ဘာတှရှေောငျသငျ့လဲ၊ ဆောငျသငျ့လဲဆိုတာတှကေို ဝမြှေပေးခငျြပါတယျ။
(၁) ပူပွငျးတဲ့နရေောငျခွညျဒဏျကွောငျ့ ခြှေးထှကျပွီး အဖုအပိနျ့ သေးသေးထှကျလာပွီဆိုတာနဲ့ ကုတျလိုကျမိကွမှာပါပဲ။ ဒီလိုကုတျလိုကျမိတာကွောငျ့ အဖုကလေးတှကေ ပှားမြားလာပွီး ယားယံလာတတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခြှေးထှကျနခြေိနျမှာ အထူးသဖွငျ့ သင်ျကွနျရစေိုနခြေိနျမှာ အရပွေားကို သနျှ့ရှငျးမှုမရှိတဲ့ လကျနဲ့ကိုငျခွငျး၊ လကျသညျးနဲ့ ကုတျဖဲ့ခွငျးမြိုး မပွုလုပျမိဖို့ သတိထားသငျ့ပါတယျနျော။
(၂) အရပွေားယားယံနခြေိနျမှာ ရခြေိုးတဲ့အခါမှာလညျး အနံ့စူးရှပွငျးထနျတဲ့ ဆပျပွာခဲမြားကို အသုံးမပွုသငျ့ပါဘူး။ Chemical နညျးတဲ့ အပြော့စားရခြေိုးဆပျပွာကိုသာ အသုံးပွုဖို့ အကွံပွုလိုပါတယျ။ ရနှေေးနဲ့ခြိုးမယျ့အစား ရအေေးအေးလေးနဲ့ ခြိုးပေးမယျဆိုရငျ ယားယံခွငျးကို သကျသာစနေိုငျပါတယျ။ ရခြေိုးပွီးရငျလညျး အစိုဓာတျထိနျးခရငျမျ တဈခုခုလိမျးပေးရပါမယျ။
(၃) အရပွေားရောဂါဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ ပူပွငျးလှနျးတဲ့ နရောတှကေို သှားလာခွငျးရှောငျကွဉျရပါမယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ ရပေတျခံမထှကျသငျ့တော့ပါဘူး။ မဏ်ဍပျမှာ ထိုငျမယျဆိုရငျလညျး အရိပျရတဲ့နရော၊ လုံခွုံတဲ့ ဝတျစားဆငျယငျမှုမြိုး ဖွဈနဖေို့လိုပါတယျ။ အပွငျသှားရငျလညျး နရေောငျခွညျနဲ့ အရပွေား တိုကျရိုကျထိတှမှေု့မရှိရလအေောငျ ထီး၊ ဦးထုပျ စသဖွငျ့ အကာအကှယျမြားဖွငျ့ သှားဖို့လိုပါတယျ။ အကောငျးဆုံးကတော့ အေးမွတဲ့နရောမှာ အနားယူမယျဆိုရငျ အမွနျဆုံးသကျသာပြောကျကငျးနိုငျပါတယျ။
(၄) ဘာကွောငျ့ အငျပွငျ၊ မိတျဖု ထှကျရသလဲဆိုတာကို မိမိကိုယျကို စမျးစဈကွညျ့နိုငျပါတယျ။ ဒီလိုမဖွဈခငျမှာ ဘာတှလေုပျခဲ့သလဲ၊ ဘာတှစေားခဲ့သလဲ၊ ဘယျလိုနထေိုငျပွုမူခဲ့သလဲဆိုတာတှကေို ပွနျလညျစမျးစဈကွညျ့ပါ။ ပူပွငျးတဲ့ ရာသီဥတုကွောငျ့ သာမာနျဖွဈတတျတဲ့ သဘောဆိုပမေယျ့ အောကျဖျောပွပါ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ လက်ခဏာတှေ ဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျတှနေဲ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပွီး ကုသမှုခံယူသငျ့ပါတယျ။
– လညျခြောငျးနာခွငျး၊ အသံဝါခွငျး
– ပြို့အနျခွငျး၊ ဝမျးဗိုကျအောငျ့ခွငျး၊ ဝမျးသှားခွငျး
– နှလုံးခုနျမွနျခွငျး၊ နှလုံးခုနျနှုနျးမမှနျခွငျး
– နှုတျခမျးတဈဝိုကျ အဖုထှကျလာခွငျး စတာတှဖွေဈလာပွီဆိုရငျတော့ မပေါ့ဆသငျ့ပါဘူး။ အရပွေား ရောဂါသကျသကျမဟုတျဘဲ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ခြို့တဲ့မှုကို ဖျောပွတဲ့လက်ခဏာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဒီလိုဖွဈလာပွီဆိုရငျတော့ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသဖို့ အကွံပွုလိုကျရပါတယျ။